Real Gaming - Page 95 of 99 - Just another WordPress site
ပရိတ်ကြိုး ကို ဆွဲဖြုတ်ပြီး ဝင်ပူးတဲ့ ကမ္ဘာအေးက ဒေါ်အေးသင်
ပရိတ်ကြိုး ကို ဆွဲဖြုတ်ပြီး ဝင်ပူးတဲ့ ကမ္ဘာအေးက ဒေါ်အေးသင် ဒီတစ်ခါတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ် သြဂုတ်လ ( ၅ ) ရက်နေ့က ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတခုကို ပြန်ပြောပြချင်ပါတယ် ။ ရန်ကုန်မြို့၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်မှာ အထည်ချုပ်စက်ရုံတရုံရှိတယ်။ စက်ရုံဝန်ထမ်းတွေ နေထိုင်ဖို့ အတွက် စက်ရုံရဲ့အနောက်ဖက်မှာတင် တန်းလျားလေးတခု ဆောက်ထား ပေးတယ် ။ ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့လရဲ့ ပထမဆုံး တနင်္လာနေ့မှာတော့ အဲ့ဒီ အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာ ခါတိုင်းနဲ့မတူတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတခု စတင်ပေါ်ပေါက် လာတော့တာပါပဲ။ အထည်ချုပ်ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာ အသက်အငယ်ဆုံးချာတိတ်မလေးတယောက်က သူ့လည်ပင်းမှာ ဆွဲထားတဲ့ ပရိတ်ကြိုးကို အလုပ်လုပ်ရင်း တန်းလန်းကနေ ဆွဲပြီးဖြုတ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ကြိုးစားနေတာကို စက်ရုံထဲမှာ လိုက်ကြည့်နေတဲ့ …
သင် မသိသေးတဲ့ ပုရစ်ကြော်ရဲ့ ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးများ
သင် မသိသေးတဲ့ ပုရစ်ကြော်ရဲ့ ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးများ အင်းဆက် ကို သရေစာလို စားနေတာမို့.. ထူးထူးခြားခြားဆေးဖက်ဝင် အာနိသင် မရှိဘူးထင်ခဲ့ဖူးတယ်..ဘယ်ဟုတ်မလဲ! သူ့ရဲ့ အာဟာရတန်ဖိုးက ကြောက်ခမန်းလိလိ…သူ့ရဲ့ နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက် နဲ့ အသုံးပြုပုံ…စားသုံးတဲ့ပုံစံတွေကလည်း ကျနော်တို့ မသိသေးတာတွေ ရှိနေတယ်ဗျ။ အဓိက ပါဝင်နေတဲ့ အာဟာရဓာတ်က ၁) #Protein အသားဓာတ် ၆၅% ပါဝင်တဲ့အတွက် အမဲသားနဲ့ ကြက်သားတွေထက်တောင် ပိုနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ NPR’s The Salt ဖော်ပြချက်မှာ *ပုရစ် ၁၀၀ ဂရမ် မှာ အသားဓာတ် ၁၃ ဂရမ် ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်.. ၂) #Magnesium ပုရစ်လို …
ဈေးသည် ရှေးတရုတ်လူကြီးသူမတွေ ဆုံးမလေ့ရှိတဲ့ စီးပွားရေးလမ်းညွှန် ( ၁၇ ) ချက်
ဈေးသည် ရှေးတရုတ်လူကြီးသူမတွေ ဆုံးမလေ့ရှိတဲ့ စီးပွားရေးလမ်းညွှန် ( ၁၇ ) ချက် ၁ ။ ဆိုင်နေရာကောင်းခြင်းဟာ ဆိုင်ကြီးတာ ငယ်တာထက် ပိုအရေးကြီးပါတယ် ။ ၂ ။ ရောင်းကုန်ရဲ့ အရည်အသွေးဟာ ဆိုင်နေရာထက် ပိုအရေးကြီးနေတတ်ပြန်တယ် ။ ၃ ။ စကားချိုချိုသာသာ ဈေးရောင်းတတ်ခြင်းဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ ဖောက်သည်ကို ပိုမြဲစေပါတယ် ။ ၄ ။ အရင်းအနှီး နည်းတာကို စိုးရိမ်ခြင်းထက်၊ ယုံကြည်မှု နည်းတာကို ပိုစိုးရိမ်သင့်ပါတယ် ။ ၅ ။ ဆိုင်ကို လှလှပပ ခင်းကျင်းတတ်ခြင်းဟာ အရေးကြီးပေမဲ့ နည်းနည်း ရှုပ်ပွနေတဲ့ ဆိုင်ငယ်ကလေးက ပိုရောင်းကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ဈေးချိုတယ်ဆိုတာကို ဝယ်ယူသူများက …
ကလေးငယ် တွေကို ထိခိုက်မှု ဖြစ်စေတဲ့ နည်းပညာရဲ့ဆိုးကျိုး ၅ ချက်
ကလေးငယ် တွေကို ထိခိုက်မှု ဖြစ်စေတဲ့ နည်းပညာရဲ့ဆိုးကျိုး ၅ ချက် ကလေးငယ်တွေကို နည်းပညာနဲ့ ထိတွေ့ခွင့်မပေးမှီ နည်းပညာရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို သိရှိနားလည်ထားတာက ကလေးငယ်တွေအတွက် ကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်။ ပြဿနာတွေကို မကြုံတွေ့ရအောင် ကြိုတင်ရှောင်ရှားတာနဲ့ ကာကွယ်ထားတာက အသင့်တော်ဆုံးသောနည်းလမ်းလည်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာ smart devices များသည် ကလေးငယ်တွေနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်များရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝအစိတ်အပိုင်းလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မိဘများအနေနဲ့ နည်းပညာရဲ့ ဆိုးကျိုးများကိုပိုပြီး စိုးရိမ်သင့်ပါတယ်။ နည်းပညာရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေများစွာရှိပေမယ့် ကလေးငယ်တွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကာလအတွင်း ရှုပ်ထွေးမှုတွေကို ရှောင်ရှားဖို့အတွက် သိထားသင့်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။ ၁။ ဆိုးရွားတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုများ အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီး အနိုင်ကျင့်တတ်သောသူများက အခြားသောသူများရဲ့ စိတ်ခံစားမှုများကို အလွဲသုံးစားပြုတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို …
လှိုင်သာယာ မှာရှိတဲ့ အဘိုးအဘွားအိမ်ခြေ(၂၀၀)ရာစာအတွက် ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းသွားမည့် ခိုင်နှင်းဝေ
လှိုင်သာယာ မှာရှိတဲ့ အဘိုးအဘွားအိမ်ခြေ(၂၀၀)ရာစာအတွက် ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းသွားမည့် ခိုင်နှင်းဝေ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ ကတော့သူမချစ်တဲ့အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့အတူ ပရဟိတအလုပ်တွေကိုပါတွဲဖက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေဟာ မိဘမဲ့ကလေးတွေကို မိခင်နဲ့မခြားကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေပြီးတော့ အမှန်တကယ်လိုအပ်မူရှိတဲ့နေရာတွေအတွက်လည်း ထောက့်ပံကူညီမူတွေကိုပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ လတ်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း သူတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ မကြာခဏဆိုသလိုလှူဒါန်းပေးလေ့ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း လှိုင်သာယာမှာရှိတဲ့ အဘိုးအဘွား အိမ်ခြေ၂၀၀ရာစာအတွက် မေလ၂၇ရက်နေ့မှာ သွားရောက်လှူဒါန်းမည့်အကြောင်း သူမရဲ့လူမူကွန်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ အဆိုပါအလှူလေးကိုတော့ သူမလှူဒါန်းထားတဲ့ ခိုင်စာကြည့်တိုက်လေးမှာနေပြီးလှူဒါန်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ယခုလိုအချိန်မျိုးမှာလှူဒါန်းချင်ပေမဲ့ အပြင်ထွက်ဖို့အခက်အခဲကြောင့် မလှူဒါန်းဖြစ်တဲ့ မိတ်ဆွေအလှူရှင်များအနေနဲ့လည်း အဆိုပါအလှူလေးမှာသူမနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီး ပါဝင်လှူဒါန်းလိုပါကလည်း လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်းကိုလည်း နိဗ္ဗာန်ဆော်ထားပါသေးတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….။ Unicode လှိုငျသာယာ မှာရှိတဲ့ အဘိုးအဘှားအိမျခွေ(၂၀၀)ရာစာအတှကျ ကိုယျတိုငျသှားရောကျလှူဒါနျးသှားမညျ့ ခိုငျနှငျးဝေ ပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ ကတော့သူမခဈြတဲ့အနုပညာအလုပျတှနေဲ့အတူ ပရဟိတအလုပျတှကေိုပါတှဲဖကျလုပျကိုငျနတောဖွဈပါတယျ။ ခိုငျနှငျးဝဟော မိဘမဲ့ကလေးတှကေို မိခငျနဲ့မခွားကာကှယျစောငျ့ရှောကျနပွေီးတော့ …
ပုဂ္ဂလိကကျောင်း ၊ မူကြိုနှင့် ဘက ကျောင်းများ ညွှန်ကြားချက် ရှိမှ ပြန်ဖွင့် ရမည်
ပုဂ္ဂလိကကျောင်း ၊ မူကြိုနှင့် ဘက ကျောင်းများ ညွှန်ကြားချက် ရှိမှ ပြန်ဖွင့် ရမည် ပုဂ္ဂလိကကျောင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေး ကျောင်းများနှင့် မူကြိုကျောင်းများအနေဖြင့် အစိုးရက ညွှန်ကြားမှသာ ပြန်ဖွင့် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာတင်မောင်ဝင်းကပြောသည် ။ COVID-19 ကူးစက်မှု ကာ ကွယ်ရန် အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကျောင်း၊ သင်တန်းများ ပိတ် ထားရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက မတ်လ ၁၅ ရက်က ညွှန်ကြားခဲ့ပြီး ထိုညွှန်ကြားချက်ကို COVID-19 ကာကွယ် ၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသား အဆင့် ဗဟိုကော်မတီ က မေလကုန် အထိ သက်တမ်း …
အ မေ ပြော တဲ့ ဆင်း ရဲ ခြင်း
အ မေ ပြော တဲ့ ဆင်း ရဲ ခြင်း သား ရေ လော က မှာ ပိုက် ဆံ ရှိ တိုင်း လည်း ချမ်း သာ တာ မ ဟုတ် သ လို ပိုက် ဆံ မ ရှိ တိုင်းလည်း ဆင်း ရဲ တာ မ ဟုတ် ပါ ဘူး ။ လူ ချမ်း သာ ဖို့ ထက် စိတ် ချမ်း သာ ဖို့ ဟာ အ ရေး ကြီး …
မဖဲဝါဆိုတာ … မဖဲဝါအကြောင်း အထုပ္ပတ္တိ အပြည့်အစုံကတော့ နန္ဓာဒေ၀ီဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ပါ။ လူ့ဘ၀က သူ့မူလနာမည်ဟာ နန္ဒာဒေ၀ီဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း သူ့ရန်သူတွေက လိုက်လို့ ပြေးရစဉ်မှာ ဖလာဝဟဆိုတဲ့ ပါဠိ အနက်ကို စွဲလို့ မဖဲဝါလို့ အသံဖလှယ်ပြီး နာမည် ယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖလာဝဟဆိုတာ ပါဠိစကားပါ။ မြန်မာလို အကျိုးကိုဆောင်သည်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဖလာဝဟ ကနေ ဖဲဝါ ဖြစ်လာတာပေါ့။ သူ့အစ်ကိုကတော့ ဖိုးစံမှဲ့ဆိုတာ သိကြပါလိမ့်မယ်။ သူ့အစ်ကိုရဲ့ လူ့ဘ၀က မူလနာမည်ဟာ မင်းရဲကျော်ခေါင်ပါ။ နောက်ပိုင်းမှ စမ္မဆိုတဲ့ ပါဠိ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ သူ့ကိုယ်သူ စံမှဲ့လို့ ပြောင်းလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စမ္မဆိုတာ မြန်မာလို …
နေရပ်ပြန် ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သားများကို ရောဂါပိုးရှိ၊ မရှိ ဓာတ်ခွဲနမူနာ စတင်စစ်ဆေး(Zawgyi-Unicode)
နေရပ်ပြန် ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သားများကို ရောဂါပိုးရှိ၊ မရှိ ဓာတ်ခွဲနမူနာ စတင်စစ်ဆေး ယမန်နေ့တွင် နယ်စပ်ဂိတ်မှ ဝင်လာသည့် ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သား ၆၀၀ ကျော်ရှိပြီး ဓာတ်ခွဲနမူနာ ၂၀၀ ကျော် ပေးပို့စစ်ဆေးနေပါသည်။ ထိုင်းမှပြန်လာသော မြန်မာလုပ်သား တစ်ဦးအား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးရန် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးက အာခေါင်တို့ပတ်ယူနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ − စောအောင်မင်းဦး(ဘားအံ)) မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်ဂိတ်မှတစ်ဆင့် နေရပ်ပြန်လာသူများကို COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီ၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် နှာခေါင်းနှင့် အာခေါင်တို့ဖတ်များရယူကာ ရောဂါပိုးရှိ၊ မရှိ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမည်ဟု မြဝတီမြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန့်ဇင် အောင်က ပြောသည်။ ထို့ကြောင့် နေရပ်ပြန်လာသူများကို ချက်ချင်းသက်ဆိုင်ရာဒေသသို့ ပို့ဆောင်တော့မည် …
နားကြပ်ကို အခြားလူတွေနဲ့ မျှဝေသုံးစွဲတာက လုံခြုံစိတ်ချရရဲ့လား?
နားကြပ်ကို အခြားလူတွေနဲ့ မျှဝေသုံးစွဲတာက လုံခြုံစိတ်ချရရဲ့လား? အလုပ်ကို ရောက်မှ နားကြပ် မေ့ကျန်ခဲ့လို့ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရတာထက် ပိုတဲ့ အရာ အနည်းငယ် ရှိပါသေးတယ်။ သင်သာ ရုံးဝန်ထမ်း တစ်ဦးဆိုရင် တစ်နေ့လုံး လေချွန်သံ၊ မုန့်ဝါးသံ၊ အသက်ရှူသံ၊ ဒီပိတ်ရက်မှာ ဘာတွေ ဖြစ်ပျက်မလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ရူးကြောင်ကြောင် အပြန်အလှန် ပြောဆိုနေတဲ့ အသံတွေကို နားထောင်ရင်း အချိန်ကုန်ဆုံးရမှာ သေချာပါတယ်။ ကြင်နာစိတ်ရှိတဲ့ လူအချို့က အဲဒီလို အခြေအနေကနေ သင့်ကို ကယ်တင်ဖို့အတွက် နားကြပ် ငှားပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းလာခဲ့မယ်ဆိုရင် တခြားလူတယောက် ရဲ့ နားကြပ်ကို အသုံးပြုဖို့ အဆင်ပြေပါ့မလား။ နားကြပ်ကို မျှဝေ သုံးစွဲတာဟာ လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိရဲ့လား။ …